026 – Mogok Meditation
အသံဖိုင်ခေါင်းစဉ်= ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အနုလောမ ပဋိလောမနည်းဖြင့် သစ္စာဆိုက်ပုံ
စာအုပ်ခေါင်းစဉ်= ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံ
ဒကာ ဒကာမတွေ ရှေးဦးစွာ ခင်ဗျားတို့လာတဲ့လမ်း ခရီးကြီးကို ဘယ်လိုများ နောက်တုန်းက ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ပြီး သကာလ နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို သတိထားပြီး သကာလ နားထောင်ပါဦး။
အခုလာခဲ့ရတဲ့ တစ်ဘဝက တစ်ဘဝ ကူးပြီး သကာလ လာခဲ့ရတာ၊ သေတာပြီးတော့ ပဋိသန္ဓေ၊ ပဋိသန္ဓေ ပြီးတော့ အို၊ အိုရာကနာ၊ နာရာကသေ၊ သေရာကနေပြီး သကာလ ပဋိသန္ဓေ ပြန်နေရ၊ အဲဒီကဲ့သို့ နေရတဲ့ ဥစ္စာကို ဒီလို ဆက်လက်ပြီး သကာလ သွားတာကို သံသရာလို့ ခေါ်သည်လို့ မှတ်ထားကြပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
စုတိပြီး ပဋိသန္ဓေ မလာဘူးလား (လာပါတယ်)၊ ပဋိသန္ဓေပြီးတော့ ဘာလာပါလိမ့် ၊ အိုတာ လာပါတယ်၊ (မှန်ပါ့)။
အိုတာလာပြီး ဘာလာပါလိမ့် (နာတာလာပါ တယ်)၊ နာတာလာပြီးတော့ (သေတာ လာပါ တယ်)၊ သေ တာလာပြီး သကာလ မဂ်ဖိုလ် မရသေးရင် ဘာလာပါလိမ့် (ပဋိသန္ဓေလာပါတယ်)၊ ပဋိသန္ဓေလာတယ် ဆိုတာ အထင်အရှားပေါ့ဗျာ (မှန်ပါ့)။
အဲဒီလို ဆက်လက်ပြီး သကာလ သွားနေတာကို သံသရာကြီးလို့ခေါ်တယ် (မှန်ပါ့)၊ သဘောကျပလား. (ကျပါပြီ ဘုရား)။
အဲဒီကဲ့သို့ သံသရာကြီးထဲမှာ သွားလာနေတော့ကို အန္တရာယ်ကင်း, ဘေးကင်းလား လို့မေးတဲ့ အခါကျ လို့ရှိရင်ဖြင့် ခဏခဏ သေပွဲဝင်ပြီး သကာလ နေခဲ့ရတာတွေ ကလည်း အထင်အရှား ဖြစ်နေတယ် (မှန်ပါ့)။
အဲဒီ သေပွဲဝင်ရတဲ့ ဥစ္စာကလည်း သံသရာဆိုတဲ့ ဥစ္စာ သည် အားလုံး ဒကာ ဒကာမတွေ မှတ်စရာက ရေပင်လယ် ကြီးနဲ့တူတာကို သံသရာလို့ခေါ်တယ် (မှန်ပါ့)။
ရေပင်လယ်ကြီးနဲ့ တူတာ ဘာခေါ်ကြမယ် (သံသရာခေါ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီဘက်က ရေပင်လယ် မှတ်လိုက်တာပေါ့ (မှန်ပါ့)၊ အဲဒီ ရေပင်လယ်တည်း ဟူသော သံသရာကြီးထဲမှာ ဝဲဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်လို့ မှတ်ရမယ် . (မှန်ပါ့)။
ဒီဘက်က ၁-နံပါတ်က သံသရာကြီး၊ လည်ပတ်နေ ရတဲ့ သံသရာကြီး၊ စုတိပဋိသန္ဓေ ခဏခဏ ပြောင်းနေရတဲ့ သံသရာကြီး၊ စုတိပဋိသန္ဓေ အို, နာ, သေ ဒီလိုသွားနေရတာ ကြီးက သံသရာ ရေပြင်ကြီး လို့ မှတ်လိုက်တာပေါ့ (မှန်ပါ့)။
အဲဒီ သံသရာရေပြင်ကြီးထဲမှာ ဘာရှိပါလိမ့်မတုံး မေးလို့ရှိရင် ရေပြင်ရှိရင် ဝဲသြဃ ရှိရတော့မယ် (မှန်ပါ့)။ ဒီဘက်ကဝဲသြဃလို့ မှတ်တာပေါ့။ ဒီဘက်က သံသရာရေပြင်။
၁-နံပါတ်က ဘာပါလိမ့် (သံသရာရေပြင်ပါ ဘုရား)။
၂-နံပါတ်က (ဝဲသြဃပါ ဘုရား)။
ဝဲသြဃရှိလို့ ရှိရင်ဖြင့် ဝဲသြဃဆိုတာ ရေတွေဖြစ်လေ သောကြောင့် ရေထဲမှာ ငါးလိပ် မကန်းတွေ ရှိလိမ့်မယ် ဆိုတာ လည်း ဒကာ ဒကာမတွေ အထင်အရှား ပေါ့ဗျာ (မှန်ပါ့)။
ဒီဘက်က ငါးလိပ်မကန်းတွေလို့ မှတ်လိုက်တာပေါ့ ဗျာ (မှန်ပါ့)၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
၁-နံပါတ်က ရေပြင်သံသရာကြီး၊ ၂-နံပါတ်က ဝဲသြဃကြီး၊ ၃-နံပါတ်က ငါးလိပ် မကန်းတွေ၊ ၄-နံပါတ်သည် ကားလို့ဆိုရင် ဒကာ ဒကာမတွေ လှိုင်းတံပိုးတွေလို့ မှတ်ထား စမ်းပါ (မှန်ပါ့)။
ဒါ ရေပြင်ကြီး၏ အင်္ဂါတွေပဲ၊ ရေပြင်ကြီးရှိလို့ ရှိရင်ဖြင့် အခုပြောခဲ့တဲ့ နောက်က သုံးမျိုးဟာ ရှိမြဲ ဓမ္မတာပဲ ဆိုတာမှတ်ရမယ်နော် (မှန်ပါ့)။
အဲဒီတော့ ဒကာ ဒကာမတွေသည်ကားလို့ ဆိုလို့ ရှိရင်ဖြင့် လူ, နတ်, ဗြဟ္မာ သတ္တဝါတည်း ဟူသော ခန္ဓာကိုယ် တွေဆက်နေတဲ့ သံသရာကြီးထဲမှာ လျှောက်ပြီး သကာလ လာတဲ့အခါကျလို့ ရှိရင်ဖြင့် လှေ, သင်္ဘောတွေနဲ့ တူတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်တွေဟာ သံသရာ ရေပြင်ကြီး လျှောက်လာတယ် ဆိုလို့ ရှိရင်ဖြင့် ဒီဘက်က ဝဲသြဃ ဆိုတာနဲ့တော့ဖြင့် တွေ့မှာပဲ (မှန်ပါ့)။
ဝဲဩဃနဲ့ တွေ့လို့ရှိရင် ဒကာ ဒကာမတို့ သည်ကားလို့ ဆိုလို့ရှိရင် ဝဲထဲမှာ လှုပ်ကာ မြုပ်ကာ မသွားရပေဘူးလား (သွားရပါတယ် ဘုရား)။
ထိုကဲ့သို့ မြုပ်သွားတဲ့ အခါကျတော့ ငါး, လိပ်, မကန်း တို့ အစာတွေ မဖြစ်ရပေဘူးလား (ဖြစ်ရပါတယ် ဘုရား)။
ဒီ ငါး, လိပ်, မကန်းတွေ အစာတွေက ဘယ့်နှယ် ကြောင့် ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့ မေးလို့ ရှိရင်ဖြင့် ဒကာ ဒကာမ တို့ လှိုင်းလုံးကြီးတွေက ဖိစီးနှိပ်စက်လာပြီဆိုမှဖြင့် ခုနင်က ဝဲတွေကလည်း ပြင်းထန်၊ ဝဲတွေက ပြင်းထန်ပြီး သံသရာ ခရီးသည်ကို စုပ်ယူသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့် ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏ အစာ မဖြစ်ရ ပေဘူးလား (ဖြစ်ရပါတယ် ဘုရား)၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
သြော်- ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ သံသရာ့ခရီးသည် ဖြစ်ရတာသည် ဒီဘဝ ၁-နံပါတ် သံသရာ ရေပြင်ထဲ လျှောက်ပြေး နေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝဲသြဃလည်း တွေ့ရမှာပဲ (တွေ့မှာပါ ဘုရား)၊ လှိုင်းတံပိုး နဲ့ကော (တွေ့မှာပါ ဘုရား)၊ ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏ အစာကော (ဖြစ်ရမှာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဘယ်ဘဝ ရောက်ရောက် ဒီအတိုင်းတွေ့မှာပဲ (မှန်ပါ့)၊ ဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီဘဝ, လူဘဝ, နတ်ဘဝ ဆိုတာကြီးက သံသရာ ကျင်လည်နေတဲ့ ခန္ဓာ အာယတန ဓာတ်တို့၏ မပြတ်ကျင်လည်ရာ သံသရာဆိုတာ မှတ်မိ ကြပလား (မှတ်မိပါပြီ ဘုရား)။
အဲဒီ သံသရာထဲမှာနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား လို့ဆိုရင် မရဏဆိုတဲ့ ဝဲတော့ဖြင့် လူတိုင်း အစုပ်ခံရမှာပဲ (မှန်ပါ့)၊ ဝဲစုပ်ပြီဆိုမှဖြင့် ဒီပုဂ္ဂိုလ် ပါသွားလို့ရှိရင်ဖြင့် ၉၆-ပါးတည်း ဟူသော ရောဂါဝေဒနာနဲ့တူတဲ့ ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏ အစာ မဖြစ်ရပေဘူးလား (ဖြစ်ရပါတယ် ဘုရား)။
အစာဖြစ်ရတဲ့ အခါကျလို့ ရှိရင်ဖြင့် လှိုင်းတံပိုးတွေက လည်း များတဲ့အထဲ ရောက်ရတော့ အစာ ဖြစ်ရငြားသော် လည်း၊ အသေကောင် ဖြစ်ရငြားသော်လည် လှိုင်းတံပိုးစီမံ သလို ခံပြီး ငါးဆွဲသလို ခံရလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က လည်း ရှင်းနေပြီ (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
သြော်- ဒါဖြင့် တို့သံသရာ ခရီးသည် သံသရာရေပြင် ကြီးလျှောက်ပြီး သကာလ စုတိ ပဋိသန္ဓေတွေနဲ့ လာခဲ့ရတာ သည် တို့ ဘယ်များ ရောက်ပါလိမ့်မတုံးလို့ မေးတော့ သံသရာ့ ခရီးသည် လှေ, သင်္ဘောနဲ့တူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် မရဏ ဆိုတဲ့ ဝဲထဲမှာ အစုပ်ခံရတာချည့်ပဲ (မှန်ပါ့)။
အစုပ်ခံရလို့ ရှိရင် ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏ အစာ ကော (ဖြစ်ရမှာပါ ဘုရား)၊ လှိုင်းတံပိုးတွေက ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏ အစာဖြစ်တဲ့ သတ္တဝါကြီးကို ဟိုလှိမ့်၊ ဒီလှိမ့်ဖြစ် အောင်ကော မလုပ်ပေ ဘူးလား (လုပ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ငါတို့ နောက်တုန်းက နေခဲ့ရတာသည် သံသရာ့ခရီးဟာ ဘယ်လိုနေခဲ့ရတယ် ဆိုတာ ယနေ့ပေါ်သွား ပြီး (ပေါ်သွားပါပြီ ဘုရား)၊ မပေါ်သေးဘူးလား (ပေါ် ပါပြီ ဘုရား)။
သံသရာ့ခရီးသည် လမ်းလျှောက် လာခဲ့ရတာ ယခု ဒကာ ဒကာမတွေသည် သံသရာ ခရီးသည် ဖြစ်ပြီး သကာလ နေသောကြောင့် ဘယ်များ သွားကြပါလိမ့်မတုံးလို့ မေးလို့ ရင်ဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ မဂ်ဖိုလ် မရသေးရင် ဝဲစုပ်ခံရမယ် (မှန်ပါ့)၊ မရဏဝဲစုပ် မခံရပေဘူးလား (ခံရပါတယ် ဘုရား)။
မရဏ ဝဲစုပ်တာ ခံချင်လို့ ခံရတာလားလို့ မေးတဲ့အခါ ကျတော့ မရဏဝဲစုပ်ကိုခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဟူသရွေ့မှာ ငါးလိပ် မကန်းတို့၏ အစာ၊ ၉၆-ပါးသော ရောဂါ ဝေဒနာတို့၏ စား ဖတ်, ဝါးဖတ်ကော မဖြစ်ရပေဘူးလား (ဖြစ်ရပါတယ် ဘုရား)။
ထိုကဲ့သို့ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ဖြစ်ရပါလိမ့်မတုံး ဆိုတော့ လှိုင်းတံပိုးတွေက ကြီးကျယ် သောကြောင့် ကိုယ်ကလည်း ကူးဖို့ ခပ်ဖို့ အရေးက အလွန့်ကို ခဲယဉ်း နေသောကြောင့် ငါး, လိပ်, မကန်းတို့သာ ကျက်စားတဲ့ နေရာ၊ ကျင်လည်နိုင်တဲ့ နေရာ၊ သူတို့သည်ကား လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် လှိုင်းတံပိုး မကြောက် တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေ သောကြောင့် လှိုင်းတံပိုးကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို လှိမ့်ကာ လူးကာ ဖြစ်အောင် ၉၆-ပါးရောဂါ ဝေဒနာတွေက နှိပ်စက် စားကြ, သောက်ကြပြီး သကာလ ဝဲထဲမြုပ် ရတယ် (မှန်ပါ့)၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီဇာတ်ဟာ ကျုပ်တို့ခန္ဓာ အာယာတန ဓာတ်တို့နဲ့ မပြတ်လည်ပြီး ပဋိသန္ဓေနေပြီး အို လိုက်၊ နာလိုက်၊ သေလိုက်၊ ပဋိသန္ဓေနေလိုက်၊ အိုလိုက်၊ နာလိုက်၊ သေလိုက် ဒီသံသရာထဲ လျှောက်နေရတာသည် ဒီဝဲစာ ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏ အစာ၊ ဒီ လှိုင်းတံပိုးတို့၏ စီမံသလို ခံရဖို့အခါ မဖြစ်ပေဘူးလား (ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် နောက်တုန်းက နေခဲ့တဲ့ အခြင်းအရာ အာကာရတွေ သိပါသလား (သိပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီသံသရာ မပြတ်သရွေ့ ကာလပတ်လုံး ဒီဝဲနဲ့ သေပွဲဝင်ရမယ် (မှန်ပါ့)၊ ဒီ ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏ အစာ ဖြစ်ရမယ် (ဖြစ်ရပါမယ် ဘုရား)၊
ဒီ လှိုင်းတံပိုးတို့၏ လှိမ့်သလို ခံရလိမ့်မယ် (ခံရ မှာပါ ဘုရား)၊ မခံရပေဘူးလား (ခံရပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ သံသရာ စခန်းသတ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပါတော့ ဆိုတော့ ဘုန်းကြီး များက တိုက်တွန်း ပါတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
မလုပ်တော့ပါဘူး ဆိုလို့ရှိရင် သံသရာခရီးသည်ဖြစ် လို့ရှိရင် ဒီ ဝဲရယ်, ဒီ ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏ အစာရယ်၊ ဒီ လှိုင်းတံပိုးတို့၏ ဖိနှိပ်မှု အလုပ်ကို သေသေချာချာ ခံရလိမ့် မယ်ဆိုတာဖြင့် မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲလို့ မှတ်လိုက်စမ်းပါ (မှန်ပါ့)၊ ကျေနပ်ပလား (ကျေနပ်ပါပြီ ဘုရား)။
နောက်ထပ် ဒီလိုပဲ သံသရာ လည်ချင်သေးလို့ရှိရင်၊ သံသရာထဲ ခရီးလျှောက်ချင် သေးလို့ ရှိရင်ဖြင့် သံသရာရေ ပြင်မှာ သင်္ဘောဆိုတဲ့ခန္ဓာ နောက်ထပ် ဒီလို သံသရာလည် ချင်သေးလို့ရှိရင် သံသရာထဲ ခရီးလျှောက်ချင် သေးလို့ရှိရင် ဖြင့်၊ သံသရာရေပြင်မှာ သင်္ဘောဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ လွှင့် ချင်သေးလို့ ရှိရင်ဖြင့် ဒီဝဲလည်း လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး. (မှန်ပါ့)။
ဒီ ငါး, လိပ်, မကန်းတို့၏အစာကော (မလွတ်ပါ ဘုရား)၊ ဒီလှိုင်း၊ လေတို့၏ ဖိနှိပ်မှုကော. (မလွတ်ပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ နောက်တုန်းက နေခဲ့တာ အနေကောင်း၊ အနေဆိုးတို့တွင် သေသေချာချာ ယခုဉာဏ် မျက်စိနဲ့ ကြည့်ပြီး ဆရာဘုန်းကြီးက ခေါင်းဆောင်ပြသဖြင့် တို့ နောက်တုန်းက နေခဲ့ရတဲ့ အနေဟာဖြင့် အနေဆိုး အသေ ဆိုးပါလား (မှန်ပါ့)။
သံသရာ ရေပြင်ကြီး ထဲမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ် ရွက် သင်္ဘောကြီးနဲ့ မောင်းနေရတယ် (မှန်ပါ့)၊ ဝဲတွေကလည်း သမုဒ္ဒရာသံသရာ ရှိလေသောကြောင့် ဝဲကလည်း စုပ်မှာပဲ (မှန်ပါ့)၊ မစုပ်ပေဘူးလား (စုပ်ပါတယ် ဘုရား)၊ ပင်လယ် မဟာသမုဒ္ဒရာဝဲ ဆိုတာ ယူဇနာ များစွာကြီးတယ် (မှန်ပါ့)။
အဲဒီ ဝဲထဲ ရောက်သွားလို့ရှိရင် ပင်လယ်ငါးတွေ၏ စားဖတ်, ဝါးဖတ်ကော (ဖြစ်ရမှာပါ ဘုရား)။
စားတဲ့ဝါးတဲ့အခါမှာ အေးအေးသာသာ ခံရသလား၊ လူးလှိမ့်ပြီး သကာလ လှိုင်း၏ အရှိန်အတိုင်း ခံနေရသလား (လှိုင်း၏အရှိန်အတိုင်း ခံနေရပါတယ် ဘုရား)။
လှိုင်း၏ အရှိန်အတိုင်း ခံပြီး သကာလ နေရသော ကြောင့် တော်ပြီ တန်ပြီဆိုတဲ့စိတ် ယနေ့ မွေးကြပါ (မှန်ပါ့)။
ဘယ်လိုမွေးရမယ် (တော်ပြီ တန်ပြီဆိုတဲ့စိတ် မွေးရပါမယ် ဘုရား)၊ တော်ပြီ တန်ပြီ၊ ဒီလမ်းဖြင့် မလျှောက် တော့ပါဘူး၊ သံသရာ ဖြတ်ပါတော့မယ် ဆိုတဲ့စိတ် မွေးကြပါ ဆိုတာ အထူး တိုက်တွန်း ပါတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အားလုံး ဒကာ ဒကာမတွေ သံသရာ ဘာလုပ်ဖို့သင့် ပါလိမ့် (ဖြတ်ဖို့ သင့်ပါတယ် ဘုရား)၊ ဖြတ်ဖို့ သင့်တယ်ဆိုတာ သီလရှင်တွေ ဘက်ကကော ကျေနပ်လား (ကျေနပ် ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် သံသရာ ဖြတ်ချင်လို့ရှိရင် သံသရာ ဖြတ်ဆိုတဲ့ တရားသည် မဂ်ရမှပြတ်မယ် (မှန်ပါ့)။
သံသရာပြတ် ဆိုတဲ့တရားသည် ဘာရမှပြတ်ပါလိမ့် (မဂ်ရမှ ပြတ်ပါတယ် ဘုရား)၊ မဂ်မရ လို့ရှိရင် (မပြတ် ပါ ဘုရား)။
မဂ်ဆိုတာသည် သစ္စာသိမှ မဂ်ဖြစ်တယ် (မှန်ပါ့)၊ သစ္စာမသိရင် (မဂ် မဖြစ်ပါ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ သစ္စာသိအောင် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ပြုကြစို့ (မှန်ပါ့)။
ဒကာ ဒကာမတွေ နေ့တိုင်းနာပြီး သကာလ နေရတဲ့ အတွက် ဒီဘက်က နှစ်ခုချထားတယ်၊ ဒကာ ဒကာမတွေမြင် ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်၊ နောက်တော့ ကြီးကြီး ပြမယ်၊ ယခုတော့ ခပ်သေးသေး ဖြစ်နေ သေးတယ် (မှန်ပါ့)၊ ဒီနှစ်ခုက ဘာပါလိမ့်၊ မနေ့က ပြခဲ့တယ် (ဇရာ မရဏပါ ဘုရား)၊ မြန်မာလိုပြန်တော့ အိုမှုနဲ့ သေမှု (မှန်ပါ့)။
ဒကာ ဒကာမတွေ ယခု ဒကာ ဒကာမတွေ၏ အတွင်းမှာ ဒီနှစ်ခု ရှိပါသလားလို့ မေးလိုက်တယ် (ရှိပါတယ် ဘုရား)။
သြော်- ဒါဖြင့် အိုမှုလည်း ရှိတယ်နော် (မှန်ပါ့)၊ သေမှုကော (ရှိပါတယ် ဘုရား)၊ ဘယ်မှာ ရှိပါလိမ့် ဒကာ ဒကာမတို့ (ခန္ဓာထဲမှာရှိပါတယ် ဘုရား)။
သေသေချာချာမှတ်ပါ၊ ဘယ်မှာရှိပါလိမ့် (ခန္ဓာ ထဲမှာရှိပါတယ် ဘုရား)၊ ဟုတ်တယ် ဒကာသိုက်တို့ ဦးလှဘူးတို့ ခန္ဓာထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ် (မှန်ပါ့)။
ဒါကြောင့် မနေ့က ပြောခဲ့ရတယ်၊ တစ်နေ့ကလည်း ပြောခဲ့ရတယ်၊ ခန္ဓာထဲမှာ တေဇောဆိုတဲ့ အပူဓာတ်ကလေး မရှိဘူးလား (ရှိပါတယ် ဘုရား)။
အပူဓာတ်သည် ဒကာ ဒကာမတို့ သူနဲ့ စပ်နေတာတွေ အကုန်လောင်ကျွမ်း အောင်တော့ လုပ်မှာပဲ (မှန်ပါ့)။
ဒါဖြင့် လောင်ကျွမ်းလို့ ရှိရင်ဖြင့် အရင်မူတွေ ပျောက် ရမှာပဲ (မှန်ပါ့)၊ နောက်မူသစ် ပေါ် ရမယ်ဆိုတာ မသေချာ ဘူးလား (သေချာပါတယ် ဘုရား)။
ဒါ့ကြောင့် တေဇောသည် ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ မီးဓာတ် သည် ဒကာ ဒကာမတို့ နဂိုမူပျောက်အောင် ပျိုတဲ့ အမူအရာတွေ ပျောက်၊ အိုတဲ့ အမူအရာတွေ ပေါ်အောင် လုပ်သော ကြောင့် ဇရာ၊ သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဇရာသည်ကားလို့ ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဇရာကို လက်သည် ကောက်ခဲ့သည် ရှိသော် တေဇောကို ကောက်ပါ (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဇရာလက်သည် ကောက်သော် (တေဇော ကောက်ရပါမယ် ဘုရား) တေဇောဆိုတဲ့ မီးဓာတ်ကို ကောက် ရတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဦးလှဘူးတို့ လူပျိုတုန်းက ရုပ်ကလာပ်တွေ ရှိသေး ရဲ့လား (မရှိပါ ဘုရား) ဒကာသိုက်တို့ကော (မရှိပါ ဘုရား) အားလုံး ဒကာ ဒကာမတွေ ရှိသေးရဲ့လား (မရှိ ပါ ဘုရား)။
ဘယ်သူလောင်လို့ ဒါလောက်တောင် ညှိုးနွမ်းလာ ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်း ထုတ်ကြည့်စမ်းပါ (တေဇောလောင်လို့ ပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် အိုအောင်လုပ်တဲ့ တရား ဝမ်းထဲမှာ ရှိနေ တယ် (မှန်ပါ့) တွဲလို့ ခွဲလို့ ရပါရဲ့လား (မရပါ ဘုရား) ခန္ဓာမရှိရင်တော့ ရမှာပဲ၊ ခန္ဓာရှိနေရင် (မရပါ ဘုရား) ခန္ဓာ မရှိရင်တော့ ရမှာပဲ၊ ခန္ဓာရှိနေရင် (မရပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခန္ဓာ ရှိနေတယ်၊ ဘာခန္ဓာ ဖြစ်ရပါလို၏ ဆိုရင်ဖြင့် တေဇော အလောင်ခံ ရပါလို၏ (ဝါ) အိုရပါလို၏ ပါသွားတယ်၊ ခန္ဓာထဲ အိုတတ်တဲ့ တရား ရှိတယ် ဆိုတာ ပေါ်ကြပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
အရင်တော့ ဒကာ ဒကာမတွေက သိပါရဲ့၊ ကျုပ် တော့ အိုပြီ အိုပြီလို့ ဘယ်သူလုပ်လို့ အိုတယ်ဆိုတဲ့ လက်သည် မရှာတတ်ဘူး (မှန်ပါ့) အခုတော့ လက်သည် တွေ့ပလား (တွေ့ပါပြီ ဘုရား) ဘာပါလိမ့် ဒကာ ဒကာမတို့ (တေဇောပါ ဘုရား)။
အဲဒီတော့ တေဇောသည် ဒကာ ဒကာမတို့ကို အိုအောင်လုပ်နေတာ ဘယ်အချိန် ကာလကပါလိမ့်မတုံး လို့ မေးခွန်းထုတ် လို့ရှိရင် အချိန်တိုင်းပဲဘုရား (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဪ ဒါဖြင့် ဘာဘဝရရ သူပါမှာပဲ (ပါမှာပါ ဘုရား) ဘာဘဝရရ နောက်က ဒကာ ဒကာမတွေ (ပါမှာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ဘယ်ဘဝ ကောင်းပါ့မလဲ ဆိုတာများ မစဉ်းစားနဲ့ (မှန်ပါ့) ဘယ်ဘဝ ကောင်းပါ့မလဲ ဆိုတာ ဘယ့်နှယ် (မစဉ်းစားနဲ့ပါ ဘုရား)။
အရင်တုန်းက မသိလို့ စဉ်းစားကြမယ်။ အင်း လူ့ဘဝထက် နတ်ဘဝ ကောင်းမလား၊ နတ်ဘဝထက် ဗြဟ္မာ ဘဝ ကောင်းမလား ဆိုပြီး သကာလ ဦးလှဘူးတို့ စဉ်းစားခဲ့ကြ တယ် (စဉ်းစားပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒီ တေဇောလောင်မှုကို မသိသေး ခင်တုန်း ကတော့ဖြင့် ဒါဟာ လူ့ထက် နတ်တော်တယ်၊ နတ်ထက် ဗြဟ္မာ တော်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားချင်လည်း စဉ်းစားကြမှာပဲ (မှန်ပါ့)။
သို့သော် ယခုအချိန်မှာဖြင့် ဇီရဏတေဇော ဆိုတဲ့ ရင့်အောင်လုပ်တဲ့ တေဇောကို ဒကာ ဒကာမတွေ ကျကျနန သိတဲ့အတွက် ဘယ်ဘဝ ရောက်ရောက် အိုအောင် လုပ်မှာ ပါတာချည့်ပဲ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဘယ်ဘဝ ရောက်ရောက် အိုအောင် လုပ်မယ့် တေဇောဟာ ဘယ့်နှယ်တုံး (ပါတာချည့်ပါ ဘုရား) ပါတာချည့်ပဲ၊ ရုပ်မှာလည်း ပါတာပဲ၊ နာမ်မှာလည်း ပါတာပဲလို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါတော့ (မှန်ပါ့)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ အိုအောင် တင် လုပ်သလားဆိုတော့ သေအောင်လည်း တေဇောပဲ (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
မယုံရင် လူတွေ စမ်းကြည့်ရင် ဒကာ ဒကာမတို့ အေးသွားပြီဆိုပါတော့ အပူတေဇော မရှိတာနဲ့ အပူတေဇော က ကဲ မင်းတို့ကိုဖြင့် ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးပိတ် လောင်ခြင်း လောင်ပြီး သကာလ ပေးလိုက်မယ် ဆိုတော့ တေဇော လည်း သူ့သတ္တိသူ ရုပ်သိမ်းပါရော ဒကာ ဒကာမတွေလည်း အလောင်းပြင်ရတယ် (မှန်ပါ့) မပြင်ရဘူးလား (ပြင်ရပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒါတွေ ဘယ်သူပါလိမ့်မတုံးလို့ မေးတော့ သတ် တာလည်း တေဇောပဲ၊ အိုအောင် လုပ်တာလည်း (တေဇောပါပဲ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
တေဇောသည် ရန်သူ အကြီးဆုံး
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ အိုသေဆိုတဲ့ နှစ်ခုသည်ကား လို့ဆိုလို့ရှိရင် ဒကာ ဒကာမတို့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တေဇောဓါတ် ပါသည် ဖြစ်လေသောကြောင့် ဒီတေဇောသည် ကားလို့ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ရန်သူ အကြီးဆုံးပဲဆိုတာ မှတ်ချက် ချပါ (မှန်ပါ့)။
တေဇောဟာ ဘာပါလိမ့် (ရန်သူ အကြီးဆုံးပါ ဘုရား) တေဇော မပါဘဲနဲ့လည်း ဒကာ ဒကာမတွေ နေလို့ မဖြစ်ဘူး (မှန်ပါ့)။
ရှိပြန်တော့လည်း အိုအောင် သေအောင် လုပ် ပြန်တယ် (မှန်ပါ့) မရှိပြန်တော့လည်း သုသာန်ပို့ရတယ် (မှန်ပါ့) ဒါဖြင့် ရန်သူနဲ့ အတူတူ နေရတဲ့ဘဝ (မှန်ပါ့) သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဘာနဲ့ အတူတူနေရပါလိမ့် (ရန်သူနဲ့ အတူတူ နေရပါတယ် ဘုရား) ဒါကြောင့် “ဇရာပိ ဒုက္ခာ” ဆိုတော့ ဘယ် ပုဂ္ဂိုလ်များ ညှာသေးသတုံး (ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှ မညှာပါ ဘုရား)။
တေဇောဟာ မညှာဘူး (မှန်ပါ့)၊ ဘုရားကိုလည်း ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ နေပူစာလှုံနေတော် မူတဲ့ အခါကျတော့ ရှင်အာနန္ဒာက အရှင်ဘုရား အရေတွေ တွန့်လိမ်ပြီး မွေးညင်းပေါက် ကလေးများလည်း တော်တော်ကျယ်ပြီး သကာလ နေပါပေါ့လား ဘုရာ့ ဆိုတော့ “ဇရာဓမ္မောမှိဇရာ အနတီတော” ကွ ဘုရားရယ်လို့ ငဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွ၊ ဒီဇရာဆိုတဲ့ တေဇောက ငါ့လည်း လောင်တာပဲ (မှန်ပါ့)။
ဘုန်းတော်ရှင်၊ ဉာဏ်တော်ရှင်၊ ကံတော်ရှင်ဆိုတော့ အတုမရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရယ်လို့ ညှာသေးရဲ့လား (မညှာ ပါ ဘုရား)။
မညှာတော့ ဒီတေဇော ပါသရွေ့ ဒီကိုယ်တော်ကြီး ဟာလည်း အိုတော်မူရတယ်၊ နောက်ဆုံးပိတ် အင်ကြင်းပင်ပျို တွေကြားမှာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူ ရတယ်ဆိုတာ တေဇော သတ်ချလိုက်တာ (မှန်ပါ့)၊ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ကျုပ်တို့လို ပါမွှားတွေ ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ ဒီ တေဇောက ဘာအသာ ပေးလိမ့်မလဲ၊ ဘုန်းတော်ရှင်၊ ကံတော်ရှင်၊ ဉာဏ်တော်ရှင်တွေ ကိုတောင်မှ အဖန်ဖန် နှိပ်စက်သေးတာ၊ “ပီဠနဋ္ဌော” ဆိုတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာ နှိပ်စက်တတ် တဲ့ တရားဖြစ်နေ သောကြောင့် ကျုပ်တို့ကို ခြွင်းချက်ပေး မလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရင် ဘယ့်နှယ်ဖြေပါ့မလဲ (ခြွင်းချက် မပေးပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် တေဇောပါ နေသောကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ တေဇောသည်ကား လို့ဆိုရင် နှိပ်စက်တတ် သောကြောင့် ဒုက္ခ သစ္စာ (မှန်ပါ့) သေအောင် သတ်သောကြောင့် (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဇရာပိ ဒုက္ခာ၊ မရဏမ္ပိ (ဒုက္ခံ ဘုရား) ဒါဖြင့် ဒီဒုက္ခသစ္စာကို ဒကာ ဒကာမတွေ လက်သည်ရှာကြ (မှန်လှပါ ဘုရား)။
ဇရာ မရဏက ဘာသစ္စာပါလိမ့် (ဒုက္ခသစ္စာ ပါ ဘုရား) တေဇောက ဝင်ပြီး နှိပ်စက်လိုက်တာ ဒကာ ဒကာမ တို့ မြင်တဲ့အတိုင်း, သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဘုရားကိုလည်း မရှောင်၊ နတ်မင်းကြီး ကိုလည်း မရှောင်၊ ဗြဟ္မာ မင်းကြီး ကိုလည်း မရှောင်၊ ပုပု ရွရွပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ ဟူသရွေ့ တို့ကိုလည်း မရှောင်ရှားဘူး၊ အကုန် လောင်ပြီး အိုအောင်, သေအောင် လုပ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား) သူ့ကို ဘာသစ္စာဖွဲ့ကြမယ် (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) ညှာတာမဖက် အမြဲနှိပ်စက် တတ်သော ကြောင့် တေဇောကို ဒုက္ခသစ္စာ (မှန်ပါ့) နှိပ်စက်ခံရ သောကြောင့်လည်း (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) နှိပ်စက်တတ် သောကြောင့်လည်း (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာ ဒီဇရာပါပြီး သကာလ အိုအောင် လုပ်တတ်တဲ့ တရား၊ သေအောင် လုပ်တတ်တဲ့ တရား ပါနေတော့ ခန္ဓာ တောင့်တတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သည် အိုခြင်းဆိုးနဲ့ ကြုံရပါလို၏ (မှန်လှပါ) သေခြင်း ဆိုးနဲ့ ကြုံရပါလို၏ (မှန်ပါ့)။
ဒါကြောင့် ဘယ်ခန္ဓာမှ ဒကာ ဒကာမတွေ မကောင်း ဘူး နှိပ်စက် ခံရတာချည်းပဲလို့ မှတ်လိုက်စမ်းပါ (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဇရာ မရဏက ဘာသစ္စာ (ဒုက္ခသစ္စာ ပါ) ဒကာ ဒကာမတွေ ဒုက္ခသစ္စာ ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း ရှာဦး (မှန်ပါ့) မရှာရပေဘူးလား (ရှာရ မှာပါ ဘုရား)။
ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့သော် ဘာရှာရမယ် (ဒုက္ခဖြစ် ကြောင်း ရှာရပါမယ် ဘုရား)။
ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာတော့ ဪ ဒီဘက်တစ်ခု ချလိုက်၊ ဒကာ ဒကာမတို့ တစ်ခုကြည့်ပါတဲ့၊ ဒါ ဘာပါလိမ့် မတုံးလို့ မေးခွန်း ထုတ်လို့ရှိရင် ဇာတိ၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဇာတိပဋိသန္ဓေ နေမိလို့ ဇရာ မရဏနဲ့ အသက်ထွက် ရတယ်ဆိုတာ ပေါ်လာကြပလား (ပေါ်လာပါပြီ ဘုရား) ဇာတိ ပဋိသန္ဓေ နေမိလို့ ဇရာ မရဏနဲ့ အသက် ထွက်ရတယ်၊ ရှင်းကြပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဇာတိက အကြောင်း၊ ဇရာမရဏက (အကျိုးပါ ဘုရား) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဇာတိဆိုတာ ပုဂ္ဂိုလ်အစ ဇာတိက (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ပုဂ္ဂိုလ်အစ ဘယ်ကပါလိမ့် (ဇာတိကပါ ဘုရား) ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ အစ ဇာတိက ဖြစ်ပြီး သကာလ နေသောကြောင့် ဇာတိရှိလို့ ရှိရင်ဖြင့် ဇရာ မရဏပြေးလို့ မလွတ်ဘူး (မလွတ်ပါ ဘုရား) လွတ်ပါ့မလား (မလွတ်ပါ ဘုရား) ရှင်းကြပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဇာတိက အကြောင်း သမုဒယသစ္စာ၊ ဇရာ မရဏက အကျိုး ဒုက္ခသစ္စာ၊ ပေါ်ကြပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် လူ့ဘဝ တောင်းရင် ဒီကရတယ် (မှန်ပါ့) ဒီကရရင် ဒီမှာဆုံးမှာပဲ (ဆုံးမှာပါ ဘုရား) နတ်ဘဝ တောင်းရင်လည်း ဒါ စ,ရမယ် (မှန်ပါ့) ဒါစ, ရပြီး ဒီဆုံးမှာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဗြဟ္မာဘဝ ရရင်လည်း ဇာတိစ, ရမယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ပြီးတော့ ဘယ်မှာ ဆုံးမယ် (ဇရာ, မရဏမှာ ဆုံးပါမယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဆင်းရဲအစနဲ့ ဆင်းရဲအဆုံး ပဲ ရှိတယ် (မှန်ပါ့) ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား) ဇာတိပိဒုက္ခာ ဆင်းရဲအစ (မှန်ပါ့) ဇရာပိဒုက္ခာ မရဏမ္ပိဒုက္ခံ (မှန်ပါ့)။
ဒါဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါတွေသည် အစ, ဘာသစ္စာ လဲ (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) အဆုံးကော (ဒုက္ခ သစ္စာပါ ဘုရား) ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့၏ ဖြစ်စဉ်ဟာဖြင့် သစ္စာဉာဏ် မျက်လုံးတပ်ပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ အစ, လည်းမကောင်း (မှန်ပါ့)၊ အဆုံးကော (မကောင်းပါ ဘုရား)၊ အလယ်ကော (မကောင်းပါ ဘုရား)၊ အလယ်မှာ ဇရာဆိုတာ ဒုက္ခသစ္စာပဲ (မှန်ပါ့)၊ အဆုံး မရဏကော (ဒုက္ခသစ္စာ ပါပဲ ဘုရား)၊ အစ, ဇာတိ ကကော (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား)၊ ရှင်းပလား (ရှင်းပါ ပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် အားလုံး ဒကာ ဒကာမတို့ ဘာများဖြစ်ချင် သေးသတုံး (ဘာမှမဖြစ်ချင်ပါ ဘုရား) ဖြစ်ချင်ရင် ဒါပဲ ဇာတိပါပဲ ဒကာ ဒကာမတို့ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
အဲဒါ ဇာတိသာရတဲ့ အခါကျလို့ ရှိရင်ဖြင့် ဇရာမရဏ တည်းဟူသော ခုနင်ကပြောခဲ့တဲ့ ဝဲဂယက် လှိုင်းတံပိုးနဲ့ အသက် ထွက်ရမှာပဲ (မှန်ပါ့) မထွက်ရ ပေဘူးလား (ထွက်ရပါတယ် ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဇာတိပစ္စယာ ဇရာမရဏ၊ ဇာတိကြောင့် ဘာဖြစ်သတုံး (ဇရာ မရဏဖြစ်ပါတယ် ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဇာတိ သမုဒယသစ္စာ (မှန်ပါ့) ဇရာ မရဏက (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား)။
ဒါ ဒကာ ဒကာမတွေ ပါးစပ်က အခု သေသေ ချာချာ ပြောနိုင်တယ် ဦးလှဘူးရေ (မှန်ပါ့) သေသေ ချာချာ ပြောနိုင်တဲ့ ဉာဏ်ကို ယနေ့ တရားပွဲမှာ ဒကာ ဒကာမတွေ ရပါတယ် (မှန်ပါ့)။
ဒီဉာဏ်ကို ရလိုက်ပါတယ်၊ ဇာတိက ဘာသစ္စာတဲ့ ၊ (သမုဒယ သစ္စာပါ ဘုရား) သမုဒယသစ္စာ ထားလိုက်ပါတော့ ဒကာသိုက်ရာ၊ အကြောင်းအကျိုး ခွဲလိုက်တော့ (မှန်ပါ့)။
ဇာတိက ဘာသစ္စာပါလိမ့် (သမုဒယသစ္စာ ပါ ဘုရား) ဇရာ မရဏက (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) ရှင်း ပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါက ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကို ပြောနေတယ်လို့ ဒကာ ဒကာမတွေ မှတ်ပါ (မှန်ပါ့)။
ဇာတိက သမုဒယသစ္စာ၊ ဇရာ မရဏက (ဒုက္ခ သစ္စာပါ ဘုရား) ခင်ဗျားတို့ ဝမ်းထဲမှာ ဘယ်သူက သမုဒယ ဘယ်သူက ဒုက္ခလို့ သိတဲ့ဉာဏ်က မဂ္ဂသစ္စာ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ခင်ဗျားတို့ ဇာတိက (သမုဒယသစ္စာ ပါ ဘုရား) ဉာဏ်နဲ့ ပြောတာ မဟုတ်လား (မှန်ပါ့) အဲဒီဉာဏ် ကလေးဟာ ဘာပါလိမ့် (မဂ္ဂသစ္စာပါ ဘုရား)။
ဇရာ မရဏ ဘာပါလိမ့် (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) အဲဒီ ဒုက္ခသစ္စာလို့ ပြောနိုင်တဲ့ ဉာဏ်ကလေးက (မဂ္ဂ သစ္စာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ သမုဒယသစ္စာ ကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ သိတာ မဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတယ် (မှန်ပါ့) ဒုက္ခသစ္စာကို သိတာလည်း (မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ သိပါတယ် ဘုရား)၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခင်ဗျားတို့ သစ္စာဘယ်နှပါး သိသွား သလဲလို့ မေးခွန်း ထုတ်လို့ရှိရင် သုံးပါး သိပါပြီ ဘုရား။ (မှန်ပါ့) မဆိုနိုင်ဘူးလား (ဆိုနိုင်ပါတယ် ဘုရား)။
ခင်ဗျားတို့ ဝမ်းထဲ သိလုံးကလေးက (မဂ္ဂသစ္စာပါ ဘုရား) ဒါဖြင့် သစ္စာဘယ်နှပါး ကိုယ်ပိုင် သိသလဲ (သုံးပါးသိပါတယ် ဘုရား) သုံးပါး ကိုယ်တိုင်သိပြီ ဆိုတာရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဖြစ်ပျက်အဆုံး သိတာသည် နိရောဓသစ္စာ
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဇာတိရော, ဇရာ, မရဏရော ခင်ဗျားတို့ ချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဖြစ်တာက ဇာတိ၊ ပျက်တာက ဇရာ, မရဏ၊ ဖြစ်ပျက် အဆုံးများ ရောက်အောင် ရှုနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ ဖြစ်ပျက် ဆုံးတာသည် နိရောဓသစ္စာ (မှန်ပါ့)။
ဖြစ်ပျက် ဆုံးတာသည် ဘာတုံး (နိရောဓသစ္စာ ပါ ဘုရား) အဲဒီလို ဆုံးအောင် လိုက်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ သစ္စာလေးပါး အပြည့်အစုံ မရဘူးလား (ရပါတယ် ဘုရား)။
ပြန်ပြောစမ်း၊ ဇာတိက ဘာတုံး (သမုဒယ သစ္စာပါ) ဇရာ မရဏက (ဒုက္ခသစ္စာပါ) သိတာ ကလေး က (မဂ္ဂသစ္စာပါ ဘုရား)။
ဒါကလေးနှစ်ခု ချုပ်အောင် ရှုနိုင်လို့ရှိရင် ချုပ်သွားရင် (နိရောဓသစ္စာပါ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ပေါ်မူကတော့ ခင်ဗျားတို့ ပွားများပြီး သကာလ ဒကာ ဒကာမတို့ မရဏဆိုတဲ့ ပျက်မှုကကော (ချုပ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဇာတိ, ဇရာ, မရဏတို့၏ ချုပ်ရာ, သိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင်ရှုပြီး သိမ်းရမှာ (မှန်ပါ) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဘာလုပ်ပြီး သိမ်းရမှာပါလိမ့် (ကိုယ်တိုင်ရှုပြီး သိမ်းရမှာပါ ဘုရား) ကိုယ်တိုင်ရှုပြီး သကာလ ဇာတိလည်း မကောင်းဘူး၊ ဇရာ မရဏလည်း မကောင်းဘူး၊ အဖြစ်နဲ့ အပျက်ပဲရှိတာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အဲဒီကဲ့သို့ ခင်ဗျားတို့ ဖြစ်ပျက် မြင်အောင်ရှုလို့ ဒီဖြစ်ပျက်တွေ မရှိရင် ကောင်းလေစွဆိုတဲ့ ဉာဏ်လာအောင် ရှုလို့ ရှိရင်ဖြင့် ဇာတိဟူသရွေ့ အကုန်ချုပ်နိုင်တယ် (မှန်ပါ့)။
အခုဖြစ်နေတဲ့ ဇာတိလည်း ချုပ်မှာပဲ၊ ပဋိသန္ဓေ ဇာတိကော (ချုပ်မှာပါ)၊ နောက်မှ သေတာကြီးလည်း ချုပ်မှာပဲ၊ အခု ခဏခဏ သေတာကိုကော (ချုပ်မှာပါ ဘုရား)။
အဲဒါ ချုပ်သွားလို့ရှိရင် ဘာသစ္စာတုံး (နိရောဓ သစ္စာပါ ဘုရား) နိရောဓသစ္စာ ဆိုတာ ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် ဒီသစ္စာလေးပါးကို ဒကာ ဒကာမတွေ သိလိုက်ခြင်းကြောင့် ဇာတိလည်း မကြိုက်တော့ဘူး (မှန်ပါ့)၊ ဇရာ မရဏကော (မကြိုက်ပါ ဘုရား)၊ အဲဒီမှာ မကြိုက်တဲ့ မဂ်ဉာဏ် မလာပေဘူးလား (လာပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒီမကြိုက်တဲ့ မဂ် လာသည်နဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေမှာ ဇာတိသမုဒယလည်း ချုပ်၊ ဇရာ မရဏကော (ချုပ်ပါတယ် ဘုရား) ရှင်းသွားပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတာ ဘာပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့ သြော် ဒီနှစ်ခု ချုပ်သွားတာကိုး (မှန်ပါ့) ဇာတိလည်း ချုပ်၊ ဇရာ မရဏကလည်း (ချုပ်ပါတယ် ဘုရား)။
ကဲ ကျုပ်တို့ ဝိပဿနာထဲ ထည့်သွင်းလိုက် တော့ အဖြစ်လည်း ချုပ်, အပျက်တွေကော (ချုပ်ပါတယ် ဘုရား) အဲဒီ ဖြစ်ပျက်တို့၏ ချုပ်ငြိမ်း ရုပ်သိမ်းရာကို ဘာခေါ် ကြမလဲ (နိဗ္ဗာန်ပါ ဘုရား)။
ဒါကြောင့် ဝိပဿနာရှုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ပျက်ဆုံး ပလားဟေ့လို့ ဆရာဘုန်းကြီးက မေးလေ့ရှိတယ် (မှန်ပါ့) မမေးသင့်ဘူးလား (မေးသင့်ပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ချုပ်အောင် ရှုစမ်းပါလို့ ခန္ဓာထဲမှာ စိတ် ဖြစ်ပျက်ရှုရှု ဆုံးအောင်ရှု၊ ရုပ်ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က (ဆုံးအောင်ရှု ရပါမယ် ဘုရား)။
ရှုလိုက်လို့ မတွေ့တော့ပါဘူး ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ နိရောဓ ပေါ်တာပဲ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒီဥစ္စာက အလုပ်စခန်းကလေး အနည်းငယ်ထည့်တာပါ။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် အများကြီး ကျန်ပါ သေးတယ် (မှန်ပါ့)။
ဇာတိကို လက်သည်ရှာကြစို့၊ ဦးလှဘူးတို့၊ ဒကာ သိုက်တို့ (မှန်လှပါ) ဇာတိလက်သည် ရှာတဲ့ အခါကျ လို့ရှိရင်ဖြင့် ဇာတိ ဘယ်က လာပါလိမ့်မလဲလို့ မေးဖို့ မလို ဘူးလား (လိုပါတယ် ဘုရား)။
လာတော့ မနေ့က ပြောခဲ့တယ်၊ ကံက လာတယ်၊ ကံကြောင့် ပဋိသန္ဓေနေတော့ ကာယကံ, ဝစီကံ, မနောကံ တည်းဟူသော ကမ္မဘဝကြောင့် ဘာဖြစ်သတုံး (ဇာတိ လာပါတယ် ဘုရား) သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ကမ္မဘဝကြောင့် (ဇာတိဖြစ်တယ်) ကဲ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ် ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား) ဘဝပစ္စယာ (ဇာတိပါ) ဇာတိ ပစ္စယာ (ဇရာ မရဏပါ ဘုရား)။ သြော် ဒီလို သွားနေတာ ပါကလားဆို တာ ပေါ်ကြပလား . (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီဘက်သုံးခု က ကာယကံ, ဝစီကံ, မနောကံတွေ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား) ကာယကံ, ဝစီကံ, မနောကံ ဆိုတာ ပေါ်လာကြပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
အေး ဒါဖြင့် ကမ္မဘဝပစ္စယာ (ဇာတိပါ) ဇာတိပစ္စယာ (ဇရာ မရဏပါ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒီလို ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျ တော့ ကမ္မဘဝက အကြောင်း သမုဒယ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဇာတိက အကျိုး၊ ဒုက္ခသစ္စာကြောင့် ဇာတိပိ ဒုက္ခာ ဆိုတာ ဒီကနေ ထောက်မှဖြစ်တာ (မှန်ပါ့) ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ ဘုရား)။
အကြောင်းကနေ ထောက်တော့မှ သူအကျိုး ဖြစ်တော့မှ ဘာသစ္စာ ဖြစ်သွားသတုံး (ဒုက္ခသစ္စာ ဖြစ်ပါတယ်) ကမ္မဘဝက (သမုဒယသစ္စာပါ ဘုရား) ဇာတိက (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား)။
ခင်ဗျားတို့ သိထားတာနဲ့ တခြားစီ
သေသေချာချာ မှတ်၊ ခင်ဗျားတို့ သိထားတာနဲ့ တခြား စီ (မှန်ပါ) သေသေချာချာ မှတ်ပါ ဒကာ ဒကာမတို့ နောက်ဆုတ် တွေးလာရတယ် ဒကာသိုက်ရ (မှန်ပါ့)။
ကမ္မဘဝကြောင့် ဘာဖြစ်သတုံး (ဇာတိ ဖြစ်ပါတယ်) ဒါဖြင့် သူက အကြောင်း၊ သူကတော့ အကျိုး မနေဘူးလား (နေပါတယ် ဘုရား) ဒါကြောင့် အကြောင်း ဆိုလျှင် သမုဒယချည့်မှတ် (မှန်ပါ့)။
ဒီသုံးခုက ဘာသစ္စာလဲ (အကြောင်း သမုဒယ သစ္စာပါ) ဒီဇာတိက (အကျိုး ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ဒီကံကြောင့် ဒီအကျိုးပေး နေတာပဲ (မှန်ပါ့) ဆိုထိုက်ပလား (ဆိုထိုက်ပါတယ် ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် သူက သမုဒယသစ္စာ (မှန်ပါ့) ကမ္မဘဝဘာတဲ့ (အကြောင်း သမုဒယ သစ္စာပါ) ဇာတိက (အကျိုး ဒုက္ခသစ္စာပါ) အကျိုး ဒုက္ခသစ္စာ ဆိုတာ ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား) သေသေချာချာ မှတ်ပါ။
ဒါဖြင့် သစ္စာ ဘယ်နှပါး သိသွားသလဲ (နှစ်ပါး သိပါတယ် ဘုရား) ကိုယ့်သိလုံးကလေးကို ဘာဆိုကြမယ် (မဂ္ဂသစ္စာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီကံလည်း ချုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီဇာတိ မချုပ်ဘူး လား (ချုပ်ပါတယ်)၊ ဒါကြောင့် စေတနာ ကိုလည်း “ရူပသဉ္စေတနာ လောကေ သဒ္ဒသဉ္စေတနာ လောကေ” ဆိုပြီး စေတနာ ကိုလည်း ဖြစ်ပျက်ရှု၊ ကံကိုလည်း ဖြစ်ပျက်ရှု တဲ့ (မှန်ပါ့)၊ ဘုရားက ဟောလေ့ရှိပါတယ် (မှန်ပါ့) သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် သူ့ကို ဖြစ်ပျက်ရှု လိုက်လို့ ရှိရင်ဖြင့် သူ့ကိုမုန်း၊ သူဆုံးရင်လည်း ဇာတိ လာပါဦးမလား (မလာပါ ဘုရား)။ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါတွေက ထပ်မှာ စိုးတဲ့အတွက် ဒကာ ဒကာမတွေ ကမ္မဘဝ ဘယ်ကလာသတုံး (ဥပါဒါန်က လာပါတယ်) ဥပါဒါန ပစ္စယာ ကမ္မဘဝေါကိုး (မှန်ပါ့) ကိုက်ပလား (ကိုက်ပါပြီ ဘုရား)။
သေသေချာချာ ကြည့်တော့ ကံတွေဖြစ်နေလို့ ကမ္မ ဘဝေါ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) ဦးလှဘူးတို့ ရှင်းကြရဲ့လား (ရှင်းပါတယ် ဘုရား)။
ဥပါဒါနပစ္စယာ ဘယ့်နှယ်ဆိုမယ် (ကမ္မဘဝေါ ပါ) ထုံစံအတိုင်း ခင်ဗျားတို့ ရထားသလို ဆိုလိုက်ပါတော့ (ဘဝေါပါ ဘုရား) ဘဝေါ ပဲတဲ့၊ မသိမှာစိုးလို့ ကံကို ဖော်ပြောလိုက်တယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်း ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီဥပါဒါန်ကြောင့် ကံတွေ ဖြစ်လာတယ် (မှန်ပါ့) မဆိုနိုင်ဘူးလား (ဆိုနိုင် ပါတယ် ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဥပါဒါနက သမုဒယသစ္စာ ဆိုတာ ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ကံလုပ်တုန်းကလည်း ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်၏ ဆင်းရဲ ခြင်း၊ စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း မလာရဘူးလား (လာရပါ တယ်)၊ ဒါကြောင့် သူ့ကို ဘာသစ္စာဆိုကြမယ် (ဒုက္ခ သစ္စာပါ)၊ ဒါဖြင့် ဥပါဒါန်က ဘာသစ္စာ (သမုဒယသစ္စာ ပါ)၊ ကံက (ဒုက္ခသစ္စာပါ)၊ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ကိုင်း ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒါဟောပြီးသား ဖြစ်လို့ ခပ်တိုတိုနဲ့ပဲ သွားပါဦးမယ်၊ ဥပါဒါန်က ဘယ်ကလာ သတုံး၊ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဖြစ်သတုံးဆိုလို့ မေးခွန်းမထုတ် ရပေဘူးလား (ထုတ်ရပါတယ် ဘုရား)။
ထုတ်လိုက်တော့ ဘာ လာတွေ့ပါလိမ့် (တဏှာ တွေ့ပါတယ်) တဏှာပဲ လာတွေ့တယ်၊ တဏှာ ပစ္စယာ ဥပါဒါနံ၊ ဥပါဒါန ပစ္စယာ ဘဝေါ၊ ဘဝပစ္စယာ ဇာတိ၊ ဇာတိ ပစ္စယာ ဇရာ မရဏ (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒီလို ထောက်လိုက်ပြန်တော့ တဏှာက သမုဒယ သစ္စာ၊ ဥပါဒါန်က ဒုက္ခသစ္စာ (မှန်ပါ့) တဏှာက အကြောင်း၊ ဥပါဒါန်က (အကျိုးပါ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် နောက်ဆုတ် သွားလာတော့ ဒါတွေ အကုန် ဒုက္ခချည့် မဖြစ်ဘူးလား (ဖြစ်ပါတယ်)
ဒါ့ကြောင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်မှာ “ဧ၀ မေတဿ ကေဝလဿ ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ” တစ်ခုလုံး ဒုက္ခချည့်ပဲလို့ ဘုရားဟောတော် မူတာ ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
တစ်ခုလုံး ဘာသစ္စာတဲ့ (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) တစ်ခုလုံး ဘာသစ္စာတဲ့ (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)
နောက်ဆုတ်သွားမှ ပေါ်တယ်၊ နို့မဟုတ်ရင် ပေါ်ပါ့မလား (မပေါ်ပါ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီတဏှာ ဘယ်ကလာပါလိမ့်မတုံး (ဝေဒနာက လာပါတယ်) ဝေဒနာရှိရင် တဏှာလာမယ် (မှန်ပါ့) သဘောကျပ လား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဝေဒနာရှိရင် (တဏှာလာပါမယ်) သုခဝေဒနာ ပစ္စယာတဏှာ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ) ဒုက္ခဝေဒနာ ပစ္စယာလည်း (တဏှာပါပဲ ဘုရား)။
ဒုက္ခရောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ပျောက်ချင်တဲ့တဏှာ သုခကို တောင့်တတဲ့ တဏှာ လာတာပဲ (မှန်ပါ့) မလာ ဘူးလား (လာပါတယ်) ဆင်းရဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ချမ်းသာ ချင်တဲ့ တဏှာ (လာပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် တဏှာ မသတ်သရွေ့ ကာလပတ်လုံး ဒကာ ဒကာမတို့ သမုဒယသစ္စာ ချုပ်ပါ့မလား (မချုပ်ပါ ဘုရား) မချုပ်သေးသရွေ့ ဒီဘက်ကဒုက္ခတွေ အစဉ်အဆက် အတိုင်း မသွားပေဘူးလား သွားမလား (သွားပါ တယ်) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့သည် ဒီနေရာမှာ နေ့တိုင်း ပြောခဲ့တယ် (မှန်ပါ့) ဘုရား ပွင့်တော် မူတယ်လို့ မပြော ဘူးလား (ပြောပါတယ် ဘုရား)။
ဝေဒနာနဲ့ တဏှာကြားမှာ ဘုရားပွင့်တယ်
ဝေဒနာနဲ့ တဏှာကြားမှာ ဘာတဲ့ (ဘုရား ပွင့်ပါတယ်) သောတာပန် ပွင့်ချင်ရင်ကော (ဝေဒနာနဲ့ တဏှာ အကြားမှာပါ ဘုရား) သကဒါဂါမ်အဖြစ် ပွင့်ချင်ရင်ကော (ဝေဒနာနဲ့ တဏှာ အကြားမှာပါ) အနာဂါမ် ပွင့်ချင်ရင်ကော (ဝေဒနာနဲ့ တဏှာ အကြားမှာပါ ဘုရား)။
ရဟန္တာ ဖြစ်ချင်ရင်ကော (ဝေဒနာနဲ့ တဏှာ အကြားမှာပါ) ဝေဒနာနဲ့ တဏှာအကြားမှာ ဖြစ်ရမယ်၊ တခြားသောနည်း မရှိဘူးဆိုတာ ပေါ်လာပလား (ပေါ် ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါကြောင့် သောတာပန် ဘယ်နေရာမှာ တည်ပါလိမ့် မတုံး ဆိုတာလည်း ဝေဒနာနဲ့ တဏှာအကြားမှာ (မှန်ပါ့)၊ ဘုရား ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မတုံး ဆိုတာကော (ဝေဒနာနဲ့ တဏှာအကြားမှာပါ)၊ ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ပေါ်တာကို ဝေဒနာမရှုနဲ့ အနိစ္စရှု
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ အခု ဝိပဿနာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေမှာ ဝေဒနာက သုခဝေဒနာ, ဒုက္ခဝေဒနာ, ဥပေက္ခာဝေဒနာလို့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ ဝေဒနာသုံးမျိုး အလှည့်အပတ်နဲ့ အကြောင်း တိုက် ဆိုင်သလို မပေါ်ဘူးလား (ပေါ်ပါတယ် ဘုရား) ပေါ် တာကို ဝေဒနာမရှုနဲ့၊ အနိစ္စရှု (မှန်ပါ့) ဝေဒနာရှိ မရှိတွေး (မှန်ပါ့)။
ကိုင်း ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ သုခဝေဒနာ ကလေး ပေါ်လာတယ်၊ ကိုယ်ပေါ်မှာ ချမ်းသာ လုံးကလေး၊ ဝမ်းထဲမှာကော ဝမ်းသာလုံးကလေး၊ သုခဝေဒနာ မပေါ်ဘူးလား (ပေါ်ပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒါ ရှိမရှိ သွေးစမ်း (မရှိပါ ဘုရား) ဒါဖြင့် မရှိတာ ဘာခေါ်မယ် (အနိစ္စပါ ဘုရား) မရှိမှန်းသိတာ (မဂ္ဂပါ ဘုရား)။
မရှိတာက အနိစ္စ၊ မရှိမှန်းသိတာက မဂ္ဂ
ဒါဖြင့် အနိစ္စနောက် မဂ္ဂ မလိုက်ဘူးလား (လိုက်ပါတယ် ဘုရား) မရှိတာက (အနိစ္စပါ) မရှိမှန်း သိတာက (မဂ္ဂပါ ဘုရား)။
ဒီတဏှာ လာသေးရဲ့ လား (မလာပါ ဘုရား) ဥပါဒါန်ကော (မလာပါ ဘုရား) ကံကော (မလာ ပါ ဘုရား) ဇာတိ (မလာပါ ဘုရား) ဇရာ မရဏ (မလာပါ ဘုရား)။
မြတ်စွာဘုရား သည်ကားလို့ ဆိုရင် ဒီနေရာက နေပြီး သကာလ ဟိုဘက် အကြောင်းတွေကို သတ်လိုက်တာ ကိုး (မှန်ပါ့) ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ဒီ နောက်ဘဝတွေ ပြတ်သွားတာလည်း သဘောကျ ပလား (ကျပါပြီ) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဝေဒနာလား၊ ပျက်မှာလား စိုက်ကြည့်
ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် ဝေဒနာကို မရှုနဲ့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင် ဝေဒနာကို စိုက်ကြည့်ပြီး ဝေဒနာလား၊ ပျက်မှာလား ဆိုတာ စိုက်ကြည့် (မှန်ပါ့) ကြည့် လိုက်တဲ့အခါ ဘာတွေ့ရမလဲ (ပျက်တာ တွေ့ရပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ပျက်တာက ဘာခေါ်ကြမယ် (အနိစ္စ ပါ) ပျက်မှန်းသိတာက (မဂ္ဂပါ ဘုရား)။
အဲဒီ မဂ္ဂသည် ဒကာ ဒကာမတို့ တဏှာကို သေစေ ပါတယ် ဆိုတော့ သူ့နောက်က တဏှာ လာသေးရဲ့ လား (မလာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီဝေဒနာ လာတဲ့ အခါ ဒကာ ဒကာမတွေ မရှု ဘဲနေတော့ ဝေဒနာပစ္စယာ (တဏှာပါ) တဏှာပစ္စယာ ၊ (ဥပါဒါနံပါ ဘုရား) ဥပါဒါနပစ္စယာ (ဘဝေါ်) ဘဝ ပစ္စယာ (ဇာတိ) ဇာတိပစ္စယာ (ဇရာ မရဏပါ ဘုရား)။
ဒါက မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လမ်းစဉ် (မှန်ပါ့) သဘောကျ ပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဝေဒနာကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲ တော်တော်ကြာ သုခပေါ်ပြန်ပြီ၊ တော်တော်ကြာ ဒုက္ခပေါ်ပြန်ပြီ၊ တော်တော် ကြာ ဥပေက္ခာ ပေါ်ပြန်ပြီ ဒကာ ဒကာမတို့၊ မရှုမိကြဘူး ဆိုလို့ ရှိရင်ဖြင့် တဏှာက လိုက်မှာပဲ (မှန်ပါ့)။
လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့သည် ဥပါဒါန် လာတော့မှာပဲတဲ့ (မှန်ပါ့) ကံကော (လာမှာပါ) ဇာတိ ဇရာ မရဏကော (လာမှာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သံသရာရှည်ပြီ (မှန်ပါ့)၊ ဒီဘက် ရှည်ထွက်သွားတယ် (မှန်ပါ့)။
ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ အနိစ္စနဲ့မဂ္ဂ နှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ် (မှန်ပါ့) သဘော ကျရဲ့လား (ကျပါတယ် ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဘယ်ဝေဒနာလာလာ ဘာ လုပ်ရမလဲ (ဖြစ်ပျက်ရှုရပါမယ်) ဖြစ်ပျက် ရှုလိုက်တော့ ကို ဖြစ်ပျက်က အနိစ္စ၊ ရှုတာက (မဂ္ဂပါ ဘုရား)။
မရှုဘဲနေရင် ဝေဒနာပစ္စယာ (တဏှာပါ ဘုရား) တဏှာပစ္စယာ (ဥပါဒါန်ပါ ဘုရား) ဥပါဒါနပစ္စယာ (ဘဝေါပါ ဘုရား)ဘဝပစ္စယာ (ဇာတိ) ဇာတိပစ္စယာ (ဇရာ မရဏပါ ဘုရား) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခင်ဗျားတို့ ဒီအလုပ်ကို မလုပ်တော့ပါဘူး ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒီဝဲထဲကို ရောက်ချင်လို့ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဒီ ငါး, လိပ်, မကန်းတွေ၏ အစာကော (ဖြစ်ချင် လို့ပါ) လှိုင်းတံပိုးတွေ၏ ဖိနှိပ်မှုကိုကော (ခံချင်လို့ပါ)
သံသရာရေပြင်ကြီး မှာလည်း နေချင်လို့ ဆိုရင်ကော (မလွဲပါ ဘုရား) ရှင်းကြပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
အလုပ် မလုပ်လို့ရှိရင် ပြတ်ပါ့မလား (မပြတ်ပါ ဘုရား) ဒါဖြင့် ပြတ်ချင်ရင် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီလိုလုပ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ပါ (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဝေဒနာကြောင့် တဏှာဖြစ် တယ်၊ ဝေဒနာက သမုဒယသစ္စာ၊ တဏှာက (ဒုက္ခ သစ္စာပါ) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဝေဒနာက (သမုဒယသစ္စာပါ) တဏှာက (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) ဒါက ရှင်သာရိပုတ္တရာ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိတော်မှာ ဟောတဲ့နည်း (မှန်ပါ့)။
ဟုတ်တယ်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒါအကြောင်းတရား တော့မှန်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အကြောင်း သမုဒယလို့ ဆိုလိုက် တယ် (မှန်ပါ့)။
ဝေဒနာက အကြောင်းသမုဒယ၊ တဏှာက အကျိုး ဒုက္ခ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) နေရာကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
သွားပါဦး ဒကာ ဒကာမတို့၊ ဒီဝေဒနာ ဘယ်ကလာ ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကော ထုတ်ဖို့ မလိုဘူးလား (လိုပါတယ် ဘုရား)။
ဘယ်ကလာပါလိမ့် (ဖဿက လာပါတယ်) ဖဿ ဆိုတဲ့ ဓမ္မကြောင့် လာတယ်ဆိုတာ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဖဿကလာတော့ ဖဿဆိုတာ တွေ့ထိတတ်တဲ့ တရား (မှန်ပါ့) တွေ့ထိတတ်တဲ့ တရား ဆိုတာကော ကျေနပ် ပလား (ကျေနပ်ပါပြီ ဘုရား)။
တွေ့ထိတတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒကာ ဒကာမတို့ ကောင်း မကောင်း မရွေးပေဘူးလား (ရွေးပါ တယ် ဘုရား) ဒါဖြင့် ဖဿပစ္စယာ (ဝေဒနာပါ ဘုရား)။
တွေ့ထိလို့ အကောင်းအဆိုးကို ဝေဖန်တယ် (မှန်ပါ့) မဝေဖန်ဘူးလား (ဝေဖန်ပါတယ် ဘုရား)။
ဒကာ ဒကာမတို့ အထည်ကို စမ်းသပ်တွေ့ထိတာ သည် ဖဿ (မှန်ပါ့)၊ ထူလို့ ကောင်းတယ်၊ ပါးလို့ ကောင်းတယ် ဆိုတာက (ဝေဒနာ)၊ သဘောကျ ပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဖဿပစ္စယာ (ဝေဒနာပါ ဘုရား) ရှင်း ပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဖဿပစ္စယာ (ဝေဒနာပါ ဘုရား)၊ ရှင်း ပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဖဿက သမုဒယသစ္စာ (မှန်ပါ့)၊ ဝေဒနာက (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား)၊ နောက် ဆုတ်သွား နောက်ဆုတ် သွားပါ ဒကာသိုက်ရ (မှန်ပါ့)၊ ရှေးအမှတ်တွေ အကုန်ဖြုတ်ပါ (မှန်ပါ့) ဖဿပစ္စယာ (ဝေဒနာ)၊ ဖဿက ဘာသစ္စာတုံး (သမုဒယသစ္စာပါ ဘုရား)။
ဖဿကြောင့် ဒကာသိုက်ရ ဝေဒနာဖြစ်တယ်၊ အဲဒီ တော့ ဖဿက အကြောင်း မနေဘူးလား (အကြောင်းပါ ဘုရား) အကြောင်း ဟူသရွေ့ သမုဒယသစ္စာချည့်မှတ် (မှန်ပါ့) ဝေဒနာဘာသစ္စာတုံး (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် ဖဿက သမုဒယသစ္စာ၊ ဝေဒနာ က ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာ ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါကြောင့် “ဧဝ မေ တဿ ကေဝလဿ ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ” မင်းတို့ ဒါတစ်ခုလုံး ဒုက္ခချည့် မှတ်ထား လို့ မပါဘူးလား (ပါ ပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒီ ပါတာကို ခင်ဗျားတို့က မတွေးမိဘူး (မှန်ပါ့) ဒီလို အကြောင်းအကျိုး မဝေဖန်လို့ မတွေး မိတာ (မှန်ပါ့) ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါကြောင့် ရှေးအသုံးအနှုန်းတွေ အကုန်ဖျက်ပါ ဆိုတာသည် ဘုန်းကြီးက အဖျက်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ နားမလည်လို့ ဒုက္ခတွေ အကုန်ပါလို့ ပြောတဲ့ဆီကို ဉာဏ်မရောက်လို့ ဒကာသိုက် ဖြည့်စွက်ရတာ (မှန်ပါ)။
အဆုံးရွတ်ကြည့်၊ “ဧဝ မေ တဿ ကေဝလဿ ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ” ဒုက္ခအစုကြီးတွေကွ တဲ့၊ ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် တစ်တန်းလုံး (မှန်ပါ့) မဆိုဘူးလား (ဆိုပါတယ် ဘုရား)။
ဒါကြောင့် နောက်ဆုတ် သွားတော့မှ ဒုက္ခအစုကြီး ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ပေါ်တယ် (မှန်ပါ့) သဘောကျ ပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဖဿက ဘာသစ္စာတုံး (သမုဒယသစ္စာပါ) ဝေဒနာက (ဒုက္ခသစ္စာပါ) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ကိုင်း ဒါဖြင့် တွေ့ထိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကောင်း, အဆိုး ဝေဖန်တယ် ဆိုတာကော ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ တစ်ခါသွားဦး ဒကာ ဒကာမတို့၊ ဒီဖဿ ဘယ်က လာပါလိမ့်မလဲလို့ မေးခွန်း ထုတ်ကြဦးစို့ (မှန်ပါ့ သဠာယတနက လာပါတယ် ဘုရား)။
အေး သဠာယတနဆိုတာ ခြောက်ခုရှိတယ် (မှန်ပါ့) မျက်လုံး, နား, နှာခေါင်း, လျှာ, ကိုယ်, စိတ်ပေါ့ဗျာ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
မျက်လုံး, နား, နှာခေါင်း, လျှာ, ကိုယ်, စိတ်ကို ဘာ ခေါ်ကြမယ် (သဠာယတနပါ) အဲ သဠာယတန ဆိုတာ ခြောက်ခု၊ သဠာယတနပါပဲ ဆိုလိုရင်းကနော် (မှန်ပါ့)။
သဠာယတနပစ္စယာ (ဖဿောပါ ဘုရား) ဒီကို ကျတော့ သဠာယတနက ဘာသစ္စာတဲ့ (သမုဒယသစ္စာ ပါ) ဖဿက (ဒုက္ခသစ္စာပါ) ဒါမှ ဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်မှာ (မှန်ပါ့) ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ ဒီနေ့ခပ်ကျဲကျဲနဲ့ပဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်ကို ဝေဖန်ရအောင်လို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ခပ်ကျဲကျဲ သွားလိုက် ပါသေးတယ် (မှန်ပါ့)။
ဒီ သဠာယတနဟာ ဘယ်က လာပါလိမ့်မလဲဆိုတာ တွေးပါဦး (နာမ်ရုပ်က လာပါတယ် ဘုရား) နာမ်ရုပ်ရှိ လို့ပေါ်လာတာ (မှန်ပါ့)။
နာမ်နဲ့ ရုပ်ရှိလို့ ခုနင်က မျက်စိ, နား, နှာခေါင်း လျှာ, ကိုယ်, စိတ်ပေါ်တယ် (မှန်ပါ့) နာမ်ရုပ် မရှိရင် (မပေါ်ပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် နာမ်ရုပ်က ဘာပါလိမ့် (သမုဒယသစ္စာ ပါ ဘုရား) သဠာယတနက (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား) ပေါ် ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ဒီလို သိသိသွားရမယ်၊ ဒီလိုမှ သာလျှင် သစ္စာသိတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရောက်တယ် (မှန်ပါ) သစ္စာသိမှ ဒကာသိုက် တို့ ဦးလှဘူးတို့ မဂ်ဉာဏ်ဖြစ်မှာနော် (မှန်ပါ့)။
လျှောက်ပြီး ရွတ်နေရုံနဲ့တော့ မဖြစ်ပါဘူး (မှန်ပါ့) မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပလား (သေချာပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် ဒီနာမ်ရုပ် ဘယ်က လာပါလိမ့်မလဲ (ဝိညာဏ်က လာပါတယ် ဘုရား) ဝိညာဏ် ဆိုတာက ပဋိသန္ဓေ၊ ပဋိသန္ဓေနေမိရင် နာမ်ရုပ် မပေါ်ပေဘူးလား (ပေါ်ပါတယ် ဘုရား)။
နာမ်ရုပ် လာလို့ရှိရင် မျက်စိ, နား, နှာခေါင်း, လျှာ, ကိုယ်, စိတ်ဆိုတဲ့ သဠာယတနဟာ (ပေါ်ပါတယ် ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား) ဒါ ဒီဘက်က ဟာတွေ အစဉ်အတိုင်း မသွားဘူးလား (သွားပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီဘက်မှာ အခု နောက်ဆုတ် သွားလိုက်တော့ ဒီကျအောင် ဒါတွေ ဒုက္ခတွေ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလား (ဖြစ်ပါ တယ် ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် “ဧ၀ မေတဿ ကေဝလဿ ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ” ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ် တစ်ခုလုံး ဒုက္ခသစ္စာ ချည်းပဲဆိုတာ ပေါ် ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဝိညာဏ်ဘယ်က လာသလဲ တွေးဦး (သင်္ခါရကပါ) သင်္ခါရ သုံးမျိုး ကလာ တယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းကြပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
အဲဒီ သင်္ခါရဆိုတာ ခင်ဗျားတို့လှူတာ, တန်းတာ, ပေးတာ, ကမ်းတာ ပဋိသန္ဓေနေချင်လို့ လှူတာ, ပေးတာ, ကမ်းတာဟူသရွေ့ သည် ဘုံဘဝကို တောင့်တပြီး လုပ်တာ၊ ဘာဖြစ်ချင် ညာဖြစ်ချင် လုပ်တဲ့ အလုပ်ဟူသရွေ့ဟာ သင်္ခါရ ချည့်မှတ်လိုက် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် သင်္ခါရက ဘာသစ္စာတုံး (သမုဒယသစ္စာပါ ဘုရား)၊ ဝိညာဏ်က (ဒုက္ခသစ္စာပါ)၊ ဝိညာဏ်ဆိုတာ ပဋိသန္ဓေနေတာ ဒကာ ဒကာမတို့ (မှန်ပါ့) သဘောကျ ပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် အိမ်ကျတော့လည်း ဒကာ ဒကာမတွေ ဒီအတိုင်းပဲမှတ်ကြပေါ့ဗျာ (မှန်ပါ့) မရရင် ဒီလိုပဲ ည ကွမ်းသီးတို့ ဘာတို့နဲ့ ပုံစံချကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ် (မှန်ပါ့)။
ဒီသင်္ခါရ သုံးခုဟာ လှူမှု၊ တန်းမှု၊ ပေးမှု၊ ကမ်းမှု ဘုံဘဝ တောင့်တပြီး သကာလ လုပ်ကြတဲ့ သင်္ခါရဟာ ဘယ်ကလာသတုံး (အဝိဇ္ဇာက လာပါတယ်)၊ ဒါဖြင့် အဝိဇ္ဇာက သမုဒယသစ္စာ၊ သင်္ခါရက (ဒုက္ခသစ္စာပါ ဘုရား)၊ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ပေါင်းလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဆယ့်နှစ်ခု မရှိပေဘူး လား (ရှိပါတယ်) တစ် နှစ် သုံး လေး ငါး ခြောက် ခုနစ် ရှစ် ကိုး တစ်ဆယ် ဆယ့်တစ် ဆယ့်နှစ် (မှန်ပါ့) ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဆယ့်နှစ်ပါးဆိုတာ သိပလား (သိပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် ဒီ အဝိဇ္ဇာသည် ဒကာ ဒကာမတို့ ယခုအချိန်မှာ သမုဒယသစ္စာ ဖြစ်တယ် (မှန်ပါ့) အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရ မဖြစ်ဘူးလား (ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား)။
သင်္ခါရကြောင့် (ဝိညာဏ်ဖြစ်ပါတယ်) ပေယျာ လ ထိုးလိုက်၊ ဇာတိကြောင့် (ဇရာ မရဏ ဖြစ်ပါတယ်) ဘယ်နှပါး ဖြစ်သွားသတုံး (ဆယ့်နှစ်ပါး ဖြစ်သွားပါတယ် ဘုရား)။
ဆယ့်နှစ်ပါး ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒါက ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်ကြီး ဖြစ်စဉ်ကို ပြလိုက်ပါတယ် (မှန်ပါ့) ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်ဝိုင်းပုံကို သတိထားပါဦး ဒကာ ဒကာမတို့ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဝိုင်းတာက ဘာပါလိမ့်မလဲလို့ မေးခွန်း ထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ့၌ ဇရာနဲ့ မရဏဆိုသော ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သံသရာ ခရီးသည် မဟုတ်လား (မှန်ပါ့)၊ အခုအတန်းကြီးဟာ သံသရာ ခရီးတန်း နေတာနော် (မှန်ပါ့)၊ ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။
ကဲ- ဒီဘဝက ဇာတိပြီးတော့ ခွဲလိုက်ဦး၊ ဒီနေ့ သေသေချာချာ မှတ်ကြ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီသုံးခုဟာ အနာဂတ် လို့မှတ်လိုက်စမ်း (မှန်ပါ့)၊ ဇာတိနဲ့ ဇရာ မရဏ ဘာခေါ် ကြမယ် (အနာဂတ် ဘဝပါ ဘုရား)။
ဟော ဒီတဏှာ, ဥပါဒါန်, ကံ ဒါတွေက အနာဂတ် အကြောင်း (မှန်ပါ့) ကာလအားဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်ကာလ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အကြောင်းအားဖြင့် (အနာဂတ် အကြောင်းပါ) ဖြစ်နေတဲ့ ကာလကတော့ (ပစ္စုပ္ပန်ကာလပါ) သဘောကျ ပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
အကြောင်းအားဖြင့် (အနာဂတ်အကြောင်းပါ ဘုရား) ကာလ အားဖြင့် (ပစ္စုပ္ပန်ကာလ ပါ ဘုရား) ပစ္စုပ္ပန် ကာလ ယခု လုပ်နေတာ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါ ပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေသည် ဒီလိုပဲ တွဲကပါဦးစို့ တဲ့၊ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား) ၁-ရယ် ၂-ရယ်ဟာ ဘာပါလိမ့် (အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရပါ ဘုရား)။
အဲဒါသည်ကားလို့ ဆိုလို့ရှိရင် ဒကာ ဒကာမတွေ မှတ်လိုက် အတိတ်ဘဝ (မှန်ပါ့) အဝိဇ္ဇာနဲ့ သင်္ခါရဟာ ဘာပါလိမ့် (အတိတ် ဘဝပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဝိညာဏ်, နာမ်ရုပ်, သဠာယတန၊ ဖဿ, ဝေဒနာ, တဏှာ, ဥပါဒါန်, ကံ၊ ဒါက ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါကလေးတွေ မှတ်မိအောင် မှတ်ပါ (မှန်ပါ့) ဒါက နေပြီး နားလည်မှ ရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် (မှန်ပါ့)။
ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီသုံးခုဟာ ဇာတိ, ဇရာ, မရဏ ဟာ ဘယ်ဘဝ ကပါလိမ့်, (အနာဂတ် ဘဝပါ ဘုရား) ဝိညာဏ်က အစကံ အဆုံး ဘယ်ဘဝပါလိမ့် (ပစ္စုပ္ပန် ဘဝပါ ဘုရား)။ အဝိဇ္ဇာနဲ့ သင်္ခါရက (အတိတ်ဘဝကပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီဘက်က အတိတ်ဘဝ (အနာဂတ်ဘဝ ပါ ဘုရား) ဘဝဘယ်နှစ်ပါး ဆက်ပြတာတုံး (သုံးပါး ပြပါတယ် ဘုရား) ရှင်းကြပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့သည် ဘဝသုံးပါး ဆက်ပြတာကို ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်လို့ မှတ်ရမယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခင်ဗျားတို့ ရပြီးသား အပေါ် မှာ ကာလအားဖြင့်လည်း ဝေဖန်တတ်တဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ ဖြစ်နေ သောကြောင့် ပြန်ပြီး သကာလ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် စက်ရဟတ်ဖြစ်ပုံကို ပြပါဦး (မှန်ပါ့)။
ဒကာ ဒကာမတို့ ဘာပြမယ်ထင်သတုံး (ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်စက်ရဟတ်ဖြစ်ပုံကို ပြပါမယ် ဘုရား) စက်ရဟတ် လည်ပုံကို ပြမယ်လို့ဆိုတာ သေသေချာချာမှတ်ပါ (မှန်ပါ့)။
ကဲ လည်ပုံပြတော့မယ်ဆိုတော့ ဒီလိုရှင်းရတယ်။ ဒကာ ဒကာမတို့ ကံက ဒီဘက် ရောက် လာတယ်၊ ဇာတိ၊ ဒီဘက်က ဇရာ မရဏ သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား) ဒီက အဝိဇ္ဇာနဲ့ သင်္ခါရ (မှန်ပါ့) နဂိုနဲ့ကပြထားလို့ ဒကာ ဒကာမတွေ မရှင်းသေးဘူးလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ် သံသရာ့ ခရီးသည်ဟာ အနာဂတ် ဘဝမှာ မသေပေဘူးလား (သေပါမယ် ဘုရား) သေတဲ့ အခါကျတော့ ခရီးသည် သေတာ မဂ်ဉာဏ်ရတာ ဟုတ်ကဲ့လား (မဟုတ်ပါ ဘုရား)။
သေခါနီးမှာ သူဇရာ မရဏသမားဟာ ဒကာ ဒကာမတို့ သူသေရမယ့်အတွက် စိုးရိမ်တယ် (မှန်ပါ့) စိုးရိမ်သောက ဗျာပါဒ မလာဘူးလား (လာပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီအထဲမှာ သောက လာလိမ့်မယ်တဲ့၊ သူသေ ခါနီးမှာ (မှန်ပါ့) ပရိဒေဝကော (လာပါတယ် ဘုရား) ဒုက္ခဒေါမနဿကော (လာပါတယ် ဘုရား)။
သေခါနီး ဘာလာပါလိမ့်၊ သောက, ပရိဒေဝ, ဒုက္ခ, ဒေါမနဿ, ဥပါယာသ (မှန်ပါ့) သေခါနီးမှာ ငါးမျိုး လာဖြစ်လိုက်တယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဒါတွေ ဖြစ်ကောင်း တာလား၊ မဖြစ် ကောင်းတာလား (မဖြစ်ကောင်းတာပါ) သို့သော် သူ့မှာ ဖြစ်ကောင်းတယ် မှတ်လို့ ဖြစ်နေတယ်. (မှန်ပါ့) သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် သူမသိလို့ ဖြစ်တာ။ ဖြစ်တော့ကို သောက ပရိဒေဝ ဒုက္ခ ဒေါမနဿ ထဲမှာ ဒကာ ဒကာမတွေက မှတ်လိုက်ပါဦး၊ အာသဝဆိုတဲ့ အဝိဇ္ဇာ စသော အာသဝလေးပါး ဝင်လာတယ် (မှန်ပါ့)။
သောက ပရိဒေဝ ဒုက္ခ ဒေါမနဿနဲ့ သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မှာ အာသဝ မလာဘူးလား (လာပါတယ် ဘုရား)။
ကာမာသဝ, ဘဝါသဝ, ဒိဋ္ဌာသဝ, အဝိဇ္ဇာသဝ ဆိုတဲ့ အာသဝလေးပါး မလာဘူးလား (လာပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒီ အာသဝေါ တရား လေးပါးက ဒီနေရာမှာ လာ သောကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီအာသဝကြောင့် ဟောဒီ ဘက်က နဂိုက ရှိနေတဲ့ အဝိဇ္ဇာ ပြန်ဆက်တယ် (မှန်ပါ့) အာသဝသမုဒယာ၊ အဝိဇ္ဇာ သမုဒယော (မှန်ပါ့) ရိပ်မိ ပလား (ရိပ်မိပါပြီ ဘုရား):
အာသဝ သမုဒယာ (အဝိဇ္ဇာသမုဒယောပါ ဘုရား) အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ (သင်္ခါရာ) သင်္ခါရပစ္စယာ (ဝိညာဏံ) မဝိုင်းသေးဘူးလား (ဝိုင်းပါပြီ ဘုရား)။
နောက်တုန်းက ဘယ်လို နေရတယ်ဆိုတာ ပေါ်ပြီ (ပေါ်ပါပြီ)၊ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
အစကို တွေ့သေးရဲ့ လား (မတွေ့ပါ ဘုရား) ဒါကြောင့် သတ္တဝါအစ ငါဘုရားမတွေ့ဘူးတဲ့ (မှန်ပါ့)၊ ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ ဘုရား)။
ခင်ဗျားတို့ ဖြစ်တဲ့ အစက (ရှာမတွေ့ပါ ဘုရား) ရှာ မတွေ့ဘူး၊ တရားတော့ တွေ့တယ်ကွာ၊ ပုဂ္ဂိုလ် အစတော့ ရှာမတွေ့ဘူး (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ပုဂ္ဂိုလ်အစက ကြက်ဥလို ဖြစ်နေတယ်၊ မတွေ့နိုင်ဘူး၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ပုဂ္ဂိုလ်အစက ကြက်ဥလိုဖြစ်နေတော့ အစရှာတွေ့ ရဲ့ လား (မတွေ့ပါ ဘုရား)။
တရားအစတော့ ငါသိတယ်တဲ့၊ အဝိဇ္ဇာနဲ့ တဏှာက စတာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ ငါမသိဘူးတဲ့ (မှန်ပါ့)။ ရိပ်မိ ပလား (ရိပ်မိပါပြီ ဘုရား) ဘယ်လောက် ထိအောင် ရှည် တယ်ဆိုတာ ပေါ်လာကြပလား (ပေါ်လာပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ နောက်တုန်းက ဘယ်လို နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မပေါ်သေးဘူးလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား) အဝိဇ္ဇာကြောင့် (သင်္ခါရ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား) သင်္ခါရကြောင့် (ဝိညာဏ် ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား) ပေယျာလ ဇာတိ ကြောင့် (ဇရာ မရဏ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဇရာ မရဏ အချိန်မှာသောက, ပရိဒေဝ, ဒုက္ခ, ဒေါမနဿ, ဥပါယာသ ဝိုင်းလာတာပဲ (မှန်ပါ့) ဝိုင်းတော့ အာသဝ ဝင်မလာ ဘူးလား (ဝင်လာပါတယ် ဘုရား) အာသဝကြောင့် ဘာဖြစ်ပြန်သတုံး (အဝိဇ္ဇာ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား) အဝိဇ္ဇာ ဖြစ်ပြန်တော့ (သင်္ခါရဖြစ် ပါတယ် ဘုရား) ကဲ မဝိုင်းသေးဘူးလား (ဝိုင်းပါ တယ် ဘုရား)။
ဘယ်တော့မဆို ခင်ဗျားတို့ နောက်တုန်းကနေခဲ့ရ တာ ဤအတိုင်းပဲလို့သာ မှတ်ပေတော့ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဒီလို ဆရာကောင်းမှ မတွေ့သေးဘူး ဆိုရင် ဘယ်နေရာက ဖြတ်ရမယ်လို့ မသိပါဘူး (မသိပါ ဘုရား) သိကြပလား (မသိပါ ဘုရား)။
နောက်တုန်းက တပည့်တော်တို့ ဘယ်လိုနေခဲ့ရ သတုံး ဟောဒီ အဝိုင်းပေါ်မှာ လျှောက်ပြေး နေတယ် (မှန်ပါ့) သံသရာ့ ခရီးသည်ပဲ (မှန်ပါ့) ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ ဘုရား)။
ဘယ်မှာနေပါလိမ့်ဗျာ (အဝိုင်းပေါ်မှာ လျှောက် ပြေးနေပါတယ် ဘုရား) အဝိုင်းပေါ်မှာ လျှောက်ပြေး နေတယ် ဆိုတာ သေချာပလား (သေချာပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ သန္တာန်မှာ အခု ဆရာ ဘုန်းကြီးက ဘုရား ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပြီး သကာလ အဝိုင်းပြေးကို ရပ်အောင် ဟောလိမ့်မယ် (မှန်ပါ့) တစ်နေ့တည်း ဟော လို့တော့ မပြီးဘူး (မှန်ပါ့) ကိုယ်ဝိုင်း နေတာ သိတော့မှ ဘယ်လို ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာ ပေါ်လာတယ် (မှန်ပါ့)။
အခု ဝိုင်းပုံပေါ်ခဲ့ပလား (ပေါ်ပါပြီ ဘုရား)။ နောက်တုန်းက ဘယ်လိုနေခဲ့ရသလဲ (အဝိုင်းပြေး ပြေး ခဲ့ရပါတယ် ဘုရား) ရှေ့ကိုလည်း ဒကာ ဒကာမတွေ ဖြတ် နည်းကို မပြရင် ဘယ်လိုသွားမယ် (အဝိုင်းပြေး ပြေးနေမှာပါ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ ဖြတ်နည်း ပြလို့ရှိရင်ဖြင့် ခင်ဗျားတို့သည် အဝိုင်း ဇာတ်သိမ်းပြီး သကာလ သံသရာပြတ်ပြီ (မှန်လှ ပါ ဘုရား) မဆိုနိုင်ဘူးလား (ဆိုနိုင်ပါတယ် ဘုရား)။ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။